Akwụkwọ ndekọ aha - ohere Franchise maka ọrịre | Franchiseek
Global Akwụkwọ ndekọ aha
Franchiseek bụ ndekọ aha aha mba ụwa niile maka maka ịre ahịa, tinyere, nnabata franchises na mba ụwa maka ịre ahịa na UK, USA, Europe, Asia na ụwa.
Ekeresimesi Egosiputara Franchises
Chọta n’okpuru ohere ngosipụta ohuru a na-ere maka ọrịre n’ime akwụkwọ ndekọ aha ụwa anyị niile
Pụrụ Iche Franchise Ohere na Kọfị Blue! Ejiri kọfị kọfị azụmahịa e si ala nweta ka ọ bụrụ ihe kacha mma ekwentị…
Banyere echiche2Biz Ideas2Biz ọkachamara na echiche azụmaahịa - ohere azụmahịa ọhụrụ achọrọ onye ọ bụla iji bulie ya, bulie ha,…
Akwụkwọ ndekọ aha zuru ụwa ọnụ
Banyere ntuziaka Franchiseek Franchiseek
E guzobere Franchiseek na 1999 ma kemgbe ahụ, enyerela ọtụtụ puku ndị na-atụ anya ịzọ ọchịchị aka ga -achọta obodo ha nke ọma. Akwụkwọ ndekọ aha franchiseek depụtara narị narị ohere ire ere na mba 60 gburugburu ụwa gụnyere ohere ndị nwere aha nnabata mba ofesi na akwụkwọ ndekọ aha franchise anyị.
Nakwa idepụta ọtụtụ narị nnabata nnabata na ikike azụmaahịa mba ofesi maka ọrịre, na-agagharị na nke kachasị ọhụrụ ụwa franchising ozi ọma. Chọgharịa site na narị franchises maka ire na mpaghara mpaghara aha aha obodo iji chọta ezigbo aha gị.
Tlọ HT Franchise
Ohere ndi Franchise Site na .lọ ọrụ aka
Franlọ nri Franchises
Shoplọ ahịa kọfị Franchises
Ahụike na Mma Mma Franchises
Ahụike na Ahụike Franchises
Franchises si n'ụlọ
Franchise Ntanetị Ntanetị
Petch Franchise metụtara
Njem na Ntụrụndụ Franchises
Gịnị bụ Franchising?
Franchising na-enye uzo iji nwe ma ghakwaa ahia nke gi, mana obughi nke gi. Okwu njikwa bụ nkwekọrịta n'etiti mmadụ abụọ; na franchisor na franchisee.
The franchisor na-enye akara ahia ma ọ bụ aha ahia nke usoro azụmaahịa guzobere yana nkọwa nke arụmọrụ azụmaahịa, na a aha bu onye n’enye ahia mbu, mgbe ufodu na nnonye ozo n’enwe ego, nke n’enye ha ikikere ahia n’okpuru akara ahia ma obu aha ahia ma were ahia aka guzobere.
Franzọ azụmaahịa azụmahịa bụ ụdị kachasị amasị ndị mmadụ. N'ime mmekọrịta azụmahịa aha franchisor, franchisor na-enye ndị franchisee ọ bụghị naanị aha ahia, ngwaahịa na ọrụ kama usoro dum maka ịre azụmaahịa. Franchisee na-anata nhọrọ saịtị na nkwado mmepe, akwụkwọ ntuziaka, ọzụzụ, ụkpụrụ ika, njikwa mma, atụmatụ ịzụ ahịa na nkwado ndụmọdụ sitere na franchisor.
Enwere nnukwu aha franchise dị ire maka aha franchise franchise, site na njịkọta akara franchise, nhicha mkpụrụ osisi na nhicha aha njịcha na franchises na ụlọ. O doro gi anya na ichota ezigbo aha gi na ndekọ aha mba ofesi Franchiseek.
Gịnị kpatara Zụrụ Azụ ahịa?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, mgbe ị na-azụta franchise, ị na-azụta usoro azụmaahịa a nwapụtara. N'adịghị ka ịmalite azụmahịa gị site na ọkọlọtọ, onye franchisor emebeworị edenyere azụmaahịa na aha akara, yana emehie niile gara aga ma chọpụta.
Franchisor ga emepụtacharịrị azụmaahịa nke franchise gafee ọtụtụ ala ugbua ya na ndị ọzọ na-eso aha franchisor niile.
Nke a bụ ihe mere franchises n'ozuzu ha ji enwe ihe ịga nke ọma karịa ma ọ bụrụ na e jiri ya na mmalite azụmaahịa. N'ezie, ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị otu na-ekwu okwu na ndị na-ekwu okwu njikwa na-ekwu na ntanetị nke ọma na ntanetị nke ọma karịa 95%, karịa nke ukwuu karịa mgbe ị na-ebido azụmahịa n'onwe gị.
Mgbe ị na-azụta franchise, ị ga-anata ihe niile ịchọrọ iji wee bido. E kwuwerị, ihe ịga nke ọma gị bụ ihe ịga nke ọma nke franchisor. Ndi franchisor ga acho ka imezu n’ihi na ina ahia n’okpuru aha akara ha ma ha choro ka I wulite aha oma nke ga enwe ezi ha na ya na otutu ndi ozo.
Bido taa ma choo ezigbo njiko gi na Franchiseek International.
Gosiputa Franchise gi
Debanye aha na ntanetị
Pịa “Tinye Franchise” na isi menu, họrọ ngwugwu ma debanye aha.
Mee Akaụntụ Gị n'ọrụ
Dejupụta ubi dị na peeji nke Tinye ndepụta. Họrọ edemede gị na mba gị.
Ndị otu anyị ga-anabata ndepụta gị n'ime ụbọchị ọrụ 1. Ọ bụrụ na achọrọ, anyị nwere ike ịhazi ndepụta gị.
Global Akụkọ Franchise
22 / 09 / 2020Ndi otu ndi otu ohuru 5 ekwuputara na QFA na-aga n’ihu n’iru
21 / 09 / 2020Pink Spaghetti Na-ebido Mmemme Ọzụzụ Franchise Ọhụrụ
18 / 09 / 2020Gịnị bụ Master Franchising?
08 / 09 / 2020Ndụmọdụ 6 dị elu maka iji nweta aha zuru ụwa ọnụ
01 / 09 / 2020Abụọ abụọ Petpals franchisees ruru na njedebe nke mba Pet Industry Federation (PIF) onyinye
01 / 09 / 20205 isi ikike niile nna ukwu franchisees kwesịrị inwe
25 / 08 / 2020Iwu IR35 na Mmetụta ya na Franchises
21 / 08 / 2020Taylor mere Franchising nwetara Thomas nhicha